I-Friction Tester Factory-i-China Friction Tester Abavelisi, ababoneleli
DRK835B Fabric Surface Friction Coefficient Tester (indlela ye-B)
I-DRK835B ilaphu lomphezulu we-friction coefficient tester (indlela ye-B) ilungele ukuvavanya ukusebenza kokukhuhlana komphezulu welaphu.
DRK835A Fabric Surface Friction Coefficient Tester (Indlela ye-A)
DRK835A ilaphu umphezulu friction coefficient tester (Indlela A) ilungele ukuvavanya ukusebenza ukukhuhlana komphezulu ilaphu.
Lo matshini wenzelwe kwaye wenziwa ngokuhambelana ne-ZBW04009-89 "Indlela yokulinganisa iFrictional Voltage of Fabrics".Phantsi kweemeko zaselabhoratri, isetyenziselwa ukuvavanya iimpawu ze-electrostatic zamalaphu okanye imisonto kunye nezinye izinto ezihlawuliswa ngendlela yokukhuhlana.
Phantsi kobushushu: (20±2)°C;umswakama ohambelanayo: 30% ± 3%, isampuli ixutywe ngezinto ezixutywayo ezichaziweyo, kwaye isampuli ihlawuliswa kwi-cylinder yeFaraday ukulinganisa intlawulo yesampuli.Emva koko uyiguqulele kwisixa sentlawulo kwindawo nganye yeyunithi.
I-DRK128C i-Martindale Abrasion Tester isetyenziselwa ukulinganisa ukuqhawuka kwamalaphu alukiweyo naphothiweyo, kwaye ingasetyenziswa kumalaphu angalukwanga.Ayifanelanga amalaphu emfumba amade.Ingasetyenziselwa ukumisela ukusebenza kweepilisi zamalaphu oboya phantsi koxinzelelo oluncinci.